YINTONI I-RAM? | INKCAZO YEMEMORI YOKUFIKELELA NGOKUNGAQHELEKANGA - ITHAMBILE
I-RAM imele iMemori yokufikelela ngokungaQhelekanga , licandelo elektroniki elibaluleke kakhulu elifunekayo ukuze ikhompyuter isebenze, i-RAM yindlela yokugcina ICPU isebenzisa ukugcina idatha yangoku yokusebenza okwethutyana. Inokufumaneka kuzo zonke iintlobo zezixhobo zekhompyuter ezinje ngee-Smartphones, iiPC, iitafile, iiseva, njl.
Kuba ulwazi okanye idatha ifikeleleka ngokungacwangciswanga, amaxesha okufunda nokubhala akhawuleza kakhulu xa kuthelekiswa nezinye iindlela zokugcina ezinje I-CD-ROM okanye iiDrive Disk Drives apho idatha igcinwa khona okanye ibuyiswa ngokulandelelana okuhamba kancinci kwinkqubo njengesiphumo sokufumana nokuba sisixa esincinci sedatha egcinwe embindini wolandelelwano kuya kufuneka sihambe ngokulandelelana konke.
Iscreen sekhompyuter esimnyama esinezikhombisi windows 10
I-RAM ifuna amandla okusebenza, ke ulwazi olugcinwe kwi-RAM luyacinywa kwakamsinya nje ukuba icinyiwe ikhompyuter. Yiyo loo nto ikwabizwa ngokuba yi Imemori eguqukayo okanye ukuGcina okwethutyana.
Ibhodi yomama inokuba nenani elithile leememori zeememori, umthengi ongumama webhodi yomama uya kuba phakathi kwe-2 kunye ne-4 yazo.
Ukuze idatha okanye iinkqubo zenziwe kwikhompyuter, kufuneka zilayishwe kwinkunzi yegusha kuqala.
Ke idatha okanye inkqubo igcinwa kuqala kwi-hard drive emva koko ukusuka kwi-hard drive, ibuyiswe kwaye ilayishwe kwi-RAM. Nje ukuba ilayishwe, i-CPU ngoku inokufikelela kwidatha okanye isebenzise inkqubo ngoku.
Kukho ulwazi oluninzi okanye idatha efikeleleka rhoqo kunabanye, ukuba imemori iphantsi kakhulu ayinakukwazi ukubamba yonke idatha efunwa yi-CPU. Xa oku kusenzeka emva koko ezinye iinkcukacha ezigqithisileyo zigcinwa kwi-hard drive ukuhlawulela imemori esezantsi.
Funda kwakhona: Yintoni iRegistry yeWindows kunye nendlela eSebenza ngayo?
Endaweni yokuba idatha ihambe ngokuthe ngqo ukusuka kwi-RAM iye kwi-CPU, kufuneka iyifumane kwakhona kwi-hard drive enesantya esikhawulezayo sokufikelela, le nkqubo icothisa ikhompyuter. Oku kunokwenziwa ngokulula ngokwandisa inani le-RAM elifunekayo eliza kusetyenziswa yikhompyuter.
Iindidi ezimbini ezahlukeneyo ze-RAM
i) IDRAM okanye i-RAM enamandla
ii) I-SDRAM okanye i-Synchronous DRAM
i) I-DRAM okanye i-RAM yeDynamic
IDram yimemori equlathe ii-capacitors, efana nebhakethi elincinci eligcina umbane, kwaye ikwezi capacitors zigcina ulwazi. Kuba idram inee-capacitors ezifuna ukuvuselelwa ngombane rhoqo, azibambisi mali ixesha elide. Ngenxa yokuba ii-capacitors kufuneka zihlaziyeke ngamandla, kulapho bafumana khona igama. Olu hlobo lwetekhnoloji ye-RAM ayisasetyenziswa ngokukuko ngenxa yokuphuhliswa kwetekhnoloji ye-RAM esebenza ngokukuko nekhawulezayo esiza kuxoxa ngayo ngaphambili.
Le itekhnoloji ye-RAM esetyenziswa ngokubanzi kwi-elektroniki yethu ngoku. I-SDRAM nayo inee-capacitors ezifanayo ne-DRAM, nangona kunjalo Umahluko phakathi kwe-SDRAM neDRAM isantya, itekhnoloji yakudala ye-DRAM iqhuba kancinci okanye isebenza ngokungxama kune-CPU, oku kwenza ukuba isantya sokudlulisa siye kwi-lag kuba imiqondiso ayilungelelaniswanga.
I-SDRAM isebenza ngokuvumelanisa nenkqubo yewotshi, yiyo loo nto ikhawuleza kune-DRAM. Yonke imiqondiso ibotshelelwe kwinkqubo yewotshi yexesha elilawulwa ngcono.
I-RAM ixhunyiwe kwibhodi yomama ngohlobo lweemodyuli ezisuswayo zomsebenzisi ezibizwa Ii-SIMMs (iimodyuli ezikwi-intanethi enye kunye nee-DIMMs) . Ibizwa ngokuba zii-DIMM kuba inemigca emibini ezimeleyo yezi zikhonkwane kwelinye icala ngelixa ii-SIMM zinomqolo omnye wezikhonkwane kwicala elinye. Icala ngalinye lemodyuli linee-168, 184, 240 okanye i-288 izikhonkwane.
Ukusetyenziswa kwee-SIMMs ngoku akusasebenzi kuba amandla ememori ye-RAM aphindwe kabini Ii-DIMM .
Ezi DIMM ziza ngamandla ememori ahlukeneyo, aphakathi kwe-128 MB ukuya kwi-2 TB. Ii-DIMM zidlulisela ii-bits ezingama-64 zeDatha ngexesha xa kuthelekiswa neeSIMM ezihambisa ii-bits ezingama-32 zeDatha ngexesha.
I-SDRAM ikalwe ngamanqanaba ahlukeneyo, kodwa ngaphambi kokuba singene kuloo nto, masiqonde ukuba yeyiphi indlela yedatha.
Isantya se-CPU silinganiswa kwimijikelezo yewotshi, ke kumjikelo wewotshi enye, nokuba zingama-32 okanye ama-64 amasuntswana edatha agqithiselwa phakathi kweCPU kunye ne-RAM, olu tshintsho lwaziwa njengedatha.
Ke phezulu isantya sewotshi ye-CPU ikhawulezisa ikhompyuter.
Okucetyiswayo: Iingcebiso ezili-15 zokunyusa isantya seKhompyuter yakho
Ngokufanayo, ne-SDRAM inejubane lewotshi apho ukufunda nokubhala kunokwenzeka khona. Ke ngokukhawuleza isantya sewotshi ye-RAM sikhawulezisa imisebenzi eyenzekayo yandisa ukusebenza kweprosesa. Oku kulinganiswa ngenani lemijikelezo enokuyenza ibalwe kwi-megahertz. Ke, ukuba i-RAM ikalwe nge-1600 MHz, yenza imijikelezo eyi-1.6 yezigidigidi ngomzuzwana.
Ke siyathemba ukuba oku kuncede ukuba uqonde ukuba i-RAM kunye neendlela ezahlukeneyo zetekhnoloji ye-RAM zisebenza njani.
I-icon engenazingcingo ilahlekile windows 10
akukho sandi emva windows 10 hlaziya i-2019
Imicrosoft microsoft ayisebenzi windows 10